I-FXCC $ 50 Simahla - I-Bonus-Start-up Imibandela neMibandela | FXCC
I-FXCC $ 50 Simahla - I-Bonus-Start-up Imigaqo neMeko
ikhaya / I-FXCC $ 50 Simahla - I-Bonus-Start-up Imigaqo neMeko
I-FXCC $ 50 Simahla - I-Bonus-Start-up Imigaqo neMeko (UKUFANELEKILEYO)
Uyavuma ukuba ngokuthatha inxaxheba kulo mnikelo ("Ukunikezela"), uya kubopha ngale miqathango kunye nemimiselo ("Imigomo") kunye nemimiselo jikelele kunye neemeko ezisebenza kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Lo Khuthazo usebenza kuze kube ngu-31 ngoDisemba 2018. (Olu khuthazo luphelile)
Esi siphakamiso siyafumaneka entsha Abathengi ababhalisiweyo abagqiba ngokuphumelelayo inkqubo yokuqinisekisa i-akhawunti baze bathumele isicelo ngeCandelo labo le-FXCC Trader Hub - iBonus Section ("Elixible Client").
I-FXCC inokuthi, ngexesha elide, unikeze i-$ 50 Free-Start-up Bonus kuye nawuphi na umthengi (njenge-FXCC), ngokwengqiqo yodwa, ubona kufanelekile.
Umxhasi oMkelekileyo uya kufumana ( kwii-24 iiyure zokusebenza zokusebenza ukususela ngexesha xa umthengi ethumela i-$ 50 Free-Isicelo sokuqala seBhonasi ) I-50 yamahhala ye-Free-Start-up Bonus ihlawulwe kwi-akhawunti yomthengi ngaphandle kweemfuno zokuqala ze-deposit ezivela kwiKlayenti.
Umntu ngamnye ovumelekileyo unelungelo lokufumana i-$ 50 Free-Start-up Bonus kuphela kanye nangona inani leakhawunti yokurhweba leyo iKlayenti igcina ngayo ngeFXCC.
Yona kuphela (1) Ibhonasi nganye kwikhaya. Ukubhalisa amaninzi ukusuka kwidilesi enye ye-IP kunye / okanye ukubhaliswa kwamanani amaninzi kunye neenkcukacha zabantu ezifanayo akuvumelekanga. Kwimeko apho iibhonasi ezininzi zifunyenwe kwiKlayenti enye (okanye ukuba kukho ukukhankanywa okunjalo, kubandakanywa nomdlalo wedilesi, umgca weenkcukacha zomntu, njl), zonke iibhonasi ziya kukhutshwa, inzuzo iya kukhanselwa, kwaye iingxelo ezibandakanyekayo ziya kuvalwa.
Ukuphakama okuphezulu kwama-akhawunti athatha inxaxheba kulo mnikelo: 1: 100.
I-$ 50 Free - I-Bonus yokuqala iya kwongezwa kwi-akhawunti yomthengi njenge-credit, le $ 50 Free - I-Bonus-Start-is intended ngeenjongo zokurhweba kuphela kunye I $ 50 Simahla - I-Bonus yokuqalisa ayikwazi ukuhoxiswa. Nangona kunjalo, inzuzo eyenziwe ngokutyalomali i-$ 50 Free - I-Bonus yokuqalisa ingahoxiswa kwi-akhawunti emva kokuthengiswa kweenxalenye ezine (4) kunye nenzuzo ifinyelela ngaphezu kwe-$ 50.
Inzuzo enkulu eyenziwe ngokutyalomali iBhonus yokuQala ukuba umxhasi angayihoxisa ngaphandle kokwenza idiphozithi yokuqala i-$ 50 kwaye iya kufumaneka ukuba ihoxiswe kuphela nge Skrill okanye iNeteller.
Azikho iikhomishana zomlingane ezihlawulwayo kwimisebenzi yokurhweba eyenziwa kuphela yi-$ 50 Free-Start-up Bonus ngaphandle kokufaka idiphozi yokuqala. Amakhomishina omqeshi angakhokhelwa kulo mnikelo kuphela xa uMthengi oziswayo wenza i-deposit encinci (ubuncinci idiphozithi yokuqala ixhomekeke kuhlobo lwe-akhawunti). Iimali ezidluliselwa phakathi kwe-akhawunti aziqwalaselwe njenge-deposit yokuqala.
I-50 Free Simahla-I-Bonus-Start-up ingasetyenziswa njengekhredithi yokurhweba kwaye iya kufumaneka kwi-akhawunti ye-Client ye-akhawunti. Iintsuku zekhalenda ze15 ukususela ngomhla wokufumana i-50 Free-Start-up Bonus. Emva kwaloo mhla, i-$ 50 Free-Start-up Bonus kunye nanoma yiyiphi inzuzo engenakunikwa (xa ikhona) iya kususwa kwi-akhawunti. (Nceda ubone amanqaku 8 & 9 malunga neemfuno zokurhoxiswa kwenzuzo).
I-50 yamahhala ye-Free-Bonus-Start-Up ayikwazi ukudluliselwa kwenye i-akhawunti yezorhwebo.
I-FXCC ayiyi kuhlawulwa nayiphi na ifowuni yomhlaba okanye ilahleko, kubandakanywa kodwa ingaphelelwanga kwilahleko ngenxa yeNqanaba lokuPhuma, ukuba iBhonus ye-50 Free-Start-up ihoxiswe nayiphi na isizathu ngenxa yeMigqaliselo neMibandela echazwe apha.
I-FXCC inelungelo lokurhoxisa nayiphi na iBhonus enikeziweyo ngokwengqiqo yayo, ngaphandle kwesidingo sokubonelela nasiphi na isizathu sokuncipha.
I-FXCC inelungelo, ngokwengqiqo yalo kuphela, ukulungelelanisa nawuphi na umntu ophula iMigqaliselo yeMigangatho kunye / okanye nayiphi na imigaqo neMigqaliselo ye-FXCC.
Nasiphi na isibonakaliso sokuxhaphaza okanye ezinye iindlela zokukhohlisa okanye ukukhwabanisa kwi-akhawunti yomthengi okanye enye inxulumene okanye ixhunywe kwi-$ 50 Free-Startup Bonus iya kubangela ukukhanselwa koMnikelo waloo mntu uchaphazelekayo kulo msebenzi.
Nayiphi na ingxabano, ukuchazwa ngokungafaniyo kweMigqaliselo neemeko ezikhankanywe apha ngasentla okanye imeko ivela kwaye ingagqitywa yiMigqaliselo neMibandela yeMinikelo, loo mbambano okanye ukuchazwa ngokungachanekiyo kuya kusombululwa yi-FXCC ngendlela ebonakala iyona nto ibonakalayo kubo bonke abachaphazelekayo. Esi sigqibo siya kuba sigqityi kunye / okanye sibophe kubo bonke abangena. Akukho ncwadana iya kufakwa.
I-FXCC inelungelo, njengokuba kungengqiqo yalo kuphela libona lifanelekileyo, ukuguqula, ukulungiswa, ukumisa, ukurhoxisa okanye ukuphelisa uMnikelo, okanye nayiphi na into yoMnikelo, nangaliphi na ixesha ngokunika isaziso ngeposi yangaphakathi ngeNkqubo yoRhwebo lwe-Intanethi, okanye nge-imeyili okanye ngokubeka isaziso kwiWebhusayithi yethu. Siza kuzama ukukunika ubuncinane isaziso seentsuku zoshishino (ezintathu ze-3) zezilungiso ngaphandle kokuba kungenakwenzeka ukuba sikwenze njalo.
Umxhasi uya kuthathwa njengokwamkela utshintsho ngaphandle kokuba uMthengi azisa iNkampani ukuba uMthengi akwamkeli utshintsho kwaye unqwenela ukukhansela umnikelo. Umthengi akayi kuhlawulwa nayiphi na inkunkuma ngenxa yokupheliswa kweli phepha, ngaphandle kweendleko ezifanelekileyo kunye nokuhlawulwa kweeNkonzo ezinikezelwa kude kube ngoko.
Ngaphandle kweemeko, i-FXCC iya kuhlawulwa nayiphi na imiphumo yoluphi utshintsho, ukulungiswa, ukumiswa, ukukhanselwa okanye ukupheliswa koPhuculo.
I-Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) ilawulwa yiKhomishini yeeNkonzo zezeMali zeVanuatu (VFSC) ngenombolo yelayisenisi ye-14576.